GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Korean Kwangali Latvian Lingala Lithuanian Luo Malagasy Malayalam Maltese Maya Mixe Mizo Mongolian Moore Myanmar Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndonga Ngabere Norwegian Nzema Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Rarotongan Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Twi Ukrainian Urdu Venda Vietnamese Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zulu
ISIOKWU ỤLỌ NCHE A: Ì KWESỊRỊ ỊTỤ ỌGWỤGWỤ ỤWA EGWU?
Olee otú obi na-adị gị ma i cheta abalị iri abụọ na otu nke ọnwa Disemba afọ 2012? Ọ bụ n’ụbọchị ahụ ka ọtụtụ ndị na-ekwu na ụwa ga-emebi. Ọ bụrụ na ụwa emebighị otú ahụ ha kwuru, o nwere ike iwute ụfọdụ ndị ma ọ bụkwanụ mee ka obi ruo ndị ọzọ ala. O nwekwara ike ime ka ụfọdụ ndị gharazie inwe mmasị n’okwu gbasara ọgwụgwụ ụwa. Ihe a ọtụtụ mmadụ na-ekwu banyere ọgwụgwụ ụwa ọ̀ bụ akụkọ ifo, ka ọ̀ ga-eme eme?
Oleekwanụ maka “ọgwụgwụ ụwa” nke e kwuru okwu ya na Baịbụl? (Matiu 24:3, Baịbụlụ Nsọ nke International Bible Society) Ụfọdụ na-atụ egwu na Chineke ga-eji ọkụ bibie ụwa. Ndị ọzọ na-achọsi ike ịma ihe ga-eme ma e bibichaa ụwa. Ọtụtụ ndị enwekwaghị mmasị ịnụ na a ga-ebibi ụwa n’ihi na ọ dịla anya ha nụwara ya, ma o nwebeghị ihe merenụ. Ma otú a obi na-adị ndị mmadụ ma ha nụ okwu gbasara ọgwụgwụ ụwa ọ̀ bụ otú o kwesịrị ịdị ha?
Ihe Baịbụl kwuru banyere ọgwụgwụ ụwa nwere ike iju gị anya. Baịbụl gwara anyị ihe ndị anyị ga-eji amata na ọgwụgwụ ụwa dị nso. Ọ gwakwara anyị na ụfọdụ ndị nwere ike ịda mbà n’obi n’ihi na ha chere na ọgwụgwụ ụwa ekweghị abịa abịa. Anyị chọrọ ka i leba anya n’otú Baịbụl si zaa ajụjụ ụfọdụ ndị mmadụ na-ajụkarị banyere ọgwụgwụ ụwa.
IHE BAỊBỤL ZARA: “[Chineke] tọrọ ntọala ụwa mee ka o sie ike; ọ gaghị ama jijiji ruo mgbe ebighị ebi, ma ọ bụ ruo mgbe niile ebighị ebi.”—ABỤ ỌMA 104:5.
Chineke agaghị eji ọkụ ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ bibie ụwa. Kama nke ahụ, Baịbụl gwara anyị na ụmụ mmadụ ga-ebi n’ụwa a ruo mgbe ebighị ebi. Abụ Ọma 37:29 kwuru, sị: “Ndị ezi omume ga-enweta ụwa, ha ga-ebikwa n’elu ya ruo mgbe ebighị ebi.”—Abụ Ọma 115:16; Aịzaya 45:18.
Mgbe Chineke kechara ụwa, o kwuru na ụwa “dị nnọọ mma.” Otú ahụ ka ọ ka dị ya n’obi. (Jenesis 1:31) Ihe Chineke chọrọ ime abụghị ibibi ụwa, kama o kwere nkwa na ya ‘ga-ebibi ndị na-ebibi ụwa,’ ọ gaghịkwa ekwe ka ụmụ mmadụ mebie ụwa otú a na-agakwaghị edozili ya.—Mkpughe 11:18.
Ma, i nwere ike ịna-eche na 2 Pita 3:7 kwuru na a ga-eji ọkụ bibie ụwa. Amaokwu ahụ, sịrị: “Eluigwe na ụwa dị ugbu a ka e debeere ọkụ.” Ọ̀ bụ na amaokwu a anaghị egosi na a ga-eji ọkụ bibie ụwa? Nke bụ́ eziokwu bụ na n’ebe ụfọdụ na Baịbụl, e ji “eluigwe,” “ụwa,” na “ọkụ” mee ihe atụ. Dị ka ihe atụ, Jenesis 11:1 kwuru, sị: “Ụwa niile wee na-asụ otu asụsụ.” “Ụwa” e kwuru okwu ya n’ebe a abụghị ụwa nkịtị, kama ọ bụ ụmụ mmadụ.
Ihe e kwuru n’amaokwu ndị bu 2 Pita 3:7 ụzọ gosiri na eluigwe na ụwa na ọkụ ahụ a kpọrọ aha ebe a bụcha ihe atụ. Amaokwu nke 5 na nke 6 ji ihe mere n’Iju Mmiri nke oge Noa tụnyere mbibi nke ga-abịa n’oge anyị a. N’oge Noa, e bibiri ụwa ochie ahụ, ma e bibighị eluigwe na ụwa anyị na-ahụ anya. Kama nke ahụ, “ụwa” nke Iju Mmiri ahụ bibiri bụ ndị ajọ mmadụ bi n’ụwa. “Eluigwe” ahụ e bibiri abụrụ ụmụ mmadụ na-achị ụwa n’oge ahụ. (Jenesis 6:11) N’ihi ya, eluigwe na ụwa e kwuru na 2 Pita 3:7 na a ga-ebibi bụ ndị ajọ omume bi n’ụwa na ọchịchị ọjọọ na-achị ha. A ga-ebibi ha kpamkpam dị ka à ga-asị na e ji ọkụ bibie ha.
Gịnị ga-eme ma e bibichaa ụwa?
IHE BAỊBỤL ZARA: “Ụwa na-agabiga, ọchịchọ ya na-agabigakwa, ma onye na-eme uche Chineke ga-anọgide ruo mgbe ebighị ebi.”—1 JỌN 2:17.
“Ụwa” amaokwu a kwuru na ọ ga-agabiga abụghị ụwa nkịtị anyị bi na ya, kama, ọ bụ ụmụ mmadụ na-anaghị erubere Chineke isi. Otú ahụ dọkịta nwere ike isi wapụ mmadụ akpụ toro ya n’ahụ́ ka onye ahụ ghara ịnwụ, ọ bụkwa otú ahụ ka Chineke ga-esi ‘ebipụ’ ndị ajọ omume ka ndị ezi omume nwee ike ikuru ume ndụ. (Abụ Ọma 37:9) Ọ bụrụ na anyị e si otú ahụ lee ya anya, anyị ga-ahụ na “ọgwụgwụ ụwa” abụghị ihe ọjọọ.
Otú e si sụgharịa “ọgwụgwụ ụwa” na Baịbụl ụfọdụ gosiri na ọgwụgwụ ụwa abụghị ihe ọjọọ. Ụfọdụ Baịbụl sụgharịrị ya “ọgwụgwụ usoro ihe a” ma ọ bụ “ọgwụgwụ nke oge a.” (Matiu 24:3; Bible Nsọ Ọhụụ) Ebe ọ bụ na a gaghị ebibi ndị ezi omume nakwa ụwa anyị a, ọ̀ bụ na anyị ekwesịghị ịtụ anya na ndị ezi omume ga-anọgide na-adị ndụ mgbe a ga-eme ka ihe niile dị ọhụrụ? Ihe Baịbụl kwuru gosiri na nke a bụ eziokwu n’ihi na o kwuru banyere “usoro ihe na-abịanụ.”—Luk 18:30.
Jizọs kpọrọ oge ahụ a ga-enwe n’ọdịnihu oge “a ga-eme ka ihe dị ọhụrụ.” N’oge ahụ, Jizọs ga-eme ka ihe dịrị ụmụ mmadụ ná mma otú Chineke bu n’obi kee ha. (Matiu 19:28) Mgbe ahụ
Anyị ga-ebi na paradaịs, obi eruo anyị niile ala, anyị enweekwa ihe ga-ezuru anyị.—Aịzaya 35:1; Maịka 4:4.
Anyị ga na-arụ ezigbo ọrụ nke ga-eme ka obi na-atọ anyị ụtọ.—Aịzaya 65:21-23.
Anyị agaghị arịa ọrịa ọ bụla.—Aịzaya 33:24.
Ndị agadi ga-aghọghachi ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa.—Job 33:25.
A ga-akpọlite ndị nwụrụ anwụ n’ọnwụ.—Jọn 5:28, 29.
Ọ bụrụ na anyị ‘ana-eme uche Chineke,’ ya bụ, na-eme ihe ndị ọ chọrọ ka anyị na-eme, anyị ekwesịghị ịtụ ọgwụgwụ ụwa egwu. Kama, anyị ga na-atụsi anya ya ike.
Ọgwụgwụ ụwa ọ̀ dịla nso n’eziokwu?
IHE BAỊBỤL ZARA: “Mgbe unu hụrụ ka ihe ndị a na-eme, maranụ na alaeze Chineke dị nso.”—LUK 21:31.
Otu ọkachamara aha ya bụ Richard Kyle dere n’akwụkwọ ya na “otú ihe si na-agbanwe na mberede nakwa ọgba aghara ndị a na-enwe n’ụwa na-eme ka ndị mmadụ na-ekwukarị mgbe ha chere ụwa ga-agwụ,” nke ka nke, ma ọ bụrụ na o yie ka ò siiri ndị mmadụ ike ịkọwa ihe kpatara mgbanwe na ọgba aghara ndị ahụ.
Ma, ihe mere ndị amụma a kọrọ akụkọ ha na Baịbụl ji buo amụma banyere ọgwụgwụ ụwa abụghị ka ha kọwaara ndị mmadụ ihe ndị na-eme n’oge ha, bụ́ ndị na-agbagwoju ndị mmadụ anya. Kama, ọ bụ ike mmụọ nsọ Chineke mere ka ha nwee ike ịkọwa ihe anyị ga-eji amata na ọgwụgwụ ụwa dị nso. Lebagodị anya n’amụma ụfọdụ ha buru ma jiri aka gị kpebie ma hà na-emezu n’oge anyị a ma ọ bụ na ha anaghị emezu.
A ga-enwe agha, ụkọ nri, ala ọma jijiji, na ajọ ọrịa na-efe efe.—Matiu 24:7; Luk 21:11.
Mmebi iwu ga-abụ ụba.—Matiu 24:12.
Ụmụ mmadụ ga na-ebibi ụwa.—Mkpughe 11:18.
Ndị mmadụ ga na-ahụ naanị onwe ha n’anya, na-ahụ ego n’anya, na-ahụkwa ihe ụtọ n’anya kama ịhụ Chineke n’anya.—2 Timoti 3:2, 4.
Ezinụlọ ga na-etisasị.—2 Timoti 3:2, 3.
Ndị mmadụ agaghị achọ ịma ihe ndị na-egosi na ọgwụgwụ ụwa dị nso.—Matiu 24:37-39.
A ga na-ekwusa ozi ọma Alaeze Chineke n’ụwa niile.—Matiu 24:14.
Jizọs kwuru na mgbe anyị na-ahụ “ihe ndị a niile” ka ha na-eme, ka anyị mara na ọgwụgwụ ụwa dị nso. (Matiu 24:33) Ndịàmà Jehova kweere na ihe ndị na-emenụ na-egosi na ọgwụgwụ ụwa dị nso, ha na-akọkwara ya ndị mmadụ na narị ala abụọ na iri atọ na isii.
Ebe ọ bụ na e nweela mgbe ndị mmadụ kwuru na ụwa ga-emebi ma o mebighị, ọ̀ pụtara na ụwa agaghịzi emebi?
IHE BAỊBỤL ZARA: “Mgbe ọ bụla ha na-asị: ‘Udo na obi iru ala!’ mgbe ahụ ka mbibi mberede ga-abịakwasị ha n’otu ntabi anya dị nnọọ ka ihe mgbu nke na-abịakwasị nwaanyị dị ime; ha agaghịkwa agbanahụ ya ma ọlị.”—1 NDỊ TESALONAỊKA 5:3.
Baịbụl ji mbibi ụwa tụnyere ime na-eme nwaanyị dị ime. Nwaanyị ime na-eme ga-enwerịrị ihe mgbu, ihe mgbu ahụ na-abịakwa na mberede. E nwekwara ike iji ihe ndị ga na-eme tupu e bibie ụwa tụnyere otú ime si eme nwaanyị ma oge ọ ga-amụ nwa ruwe. Otú ime si emesi ya ike na-egosi ya na oge ọ ga-amụ nwa eruola nso. Dọkịta ya nwere ike ịgwa ya ụbọchị ọ ga-atụ anya ịmụ nwa. Ọ bụrụgodị na ụbọchị ahụ eruo, ya abụrụ na ọ mụghị nwa, ọ ma na ya ka ga-amụ nwa ahụ n’oge na-adịghị anya. Otú ahụ ka ọ dịkwa ọgwụgwụ ụwa. Ọ bụrụgodị na e nwee mgbe ndị mmadụ tụrụ anya na ọgwụgwụ ga-abịa, ma ya aghara ịbịa mgbe ahụ, nke ahụ apụtaghị na ihe ndị na-eme ugbu a anaghị egosi na anyị bi “n’oge ikpeazụ.”—2 Timoti 3:1.
Ebe ọ bụ na ihe ndị na-eme ugbu a na-egosi na anyị bi n’oge ikpeazụ, i nwere ike ịjụ sị, ‘gịnị mere ọtụtụ ndị amaghị na ihe ndị a na-egosi na anyị bi n’oge ikpeazụ?’ Baịbụl kwuru na ka ọgwụgwụ ụwa na-eru nso, ọtụtụ ndị agaghị ekweta na ihe ndị na-eme ugbu a na-egosi na anyị bi na mgbe ọgwụgwụ. Ha agaghịkwa ekweta na ụwa jọrọ njọ ugbu a karịa otú ọ dị na mbụ. Ha ga na-achị ndị kwetara na anyị bi n’oge ikpeazụ ọchị ma na-ekwu, sị: “Site n’ụbọchị nna nna anyị hà dara n’ụra ọnwụ, ihe niile ka dị kpọmkwem otú ha dị site ná mmalite okike.” (2 Pita 3: 3, 4) N’ihi ya, o doro anya na ihe ndị na-eme ugbu a na-egosi na anyị bi n’oge ikpeazụ, ma ọtụtụ ndị agaghị ekweta.—Matiu 24:38, 39.
N’isiokwu a, anyị amụtala ihe ụfọdụ Baịbụl kwuru na-egosi na ọgwụgwụ ụwa dị nso. * Ị̀ ga-achọ ịmatakwu ihe ndị ọzọ Baịbụl kwuru a ga-eji amata na anyị bi n’oge ikpeazụ? Ọ bụrụ na ị chọrọ, gwa Ndịàmà Jehova ka ha bịa mụwara gị Baịbụl n’efu. Gị na ha nwere ike ịmụ Baịbụl n’ụlọ gị ma ọ bụ n’ebe ọ bụla ga-akara gị mma. Ha nwekwara ike iji ekwentị mụwara gị Baịbụl. Naanị ihe ọ ga-ewe gị bụ oge gị. Uru ị ga-erite na ya enweghịkwa atụ.
^ para. 39 Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmatakwu banyere ihe ndị a kọrọ n’isiokwu a, gụọ isi nke 9, bụ́ “Ànyị Na-ebi ‘n’Ụbọchị Ikpeazụ’?” n’akwụkwọ bụ́ Gịnị n’Ezie Ka Bible Na-akụzi? Ọ bụ Ndịàmà Jehova bipụtara ya.
Ò NWEELA MGBE NDỊÀMÀ JEHOVA KWURU OGE ỤWA GA-AGWỤ, YA AGHARA ỊGWỤ MGBE AHỤ?
O nweela mgbe Ndịàmà Jehova tụrụ anya na ụwa ga-agwụ, ma ụwa agwụghị mgbe ahụ. Ụdị ihe ahụ mekwara ndị mbụ soro ụzọ Jizọs. O nweela mgbe anyị tụrụ anya na amụma ụfọdụ e buru na Baịbụl ga-emezu, ma ya abụrụ na oge Chineke chọrọ ka ha mezuo erubeghị. (Luk 19:11; Ọrụ Ndịozi 1:6; 2 Ndị Tesalonaịka 2:1, 2) Anyị kwetara na ihe A. H. Macmillan kwuru bụ eziokwu. O kwuru, sị: “Amụtara m na ọ bụrụ na anyị emejọọ ihe, anyị kwesịrị ikweta na anyị mejọrọ ihe ma nọgide na-amụ Okwu Chineke ka anyị ghọtakwuo ihe na-edoghị anyị anya.” A. H. Macmillan bụ Onyeàmà Jehova. O fere Jehova ogologo oge tupu ya anwụọ.
Ma, gịnị mere anyị ka ji na-ekwusi ike na ọgwụgwụ dị nso? Ọ bụ maka na anyị ejighị ihe Jizọs kwuru egwuri egwu. Jizọs kwuru, sị: “Na-elenụ anya, mụrụnụ anya.” Ọ bụrụ na anyị akwụsị ikwusa na ọgwụgwụ dị nso, Jizọs ga-ewere ya na anyị “na-ehi ụra,” ọ ga-ewesakwa anyị iwe. (Mak 13:33, 36) Gịnị mere anyị ji kwuo otú ahụ?
Chebara ihe atụ a echiche: Onye nche nwere ike ịnọ n’ebe ọ nọ na-eche nche kụọ ékwé, sị na ndị ọjọọ na-abịa, ma e mechaa ya abụrụ na e nweghị ndị ọjọọ na-abịanụ. Ékwé ahụ ọ kụrụ gosiri na ọ mụ anya, ọ bụ eziokwu na e nweghị ndị ọjọọ bịaranụ. Otu ụbọchị, anya ahụ ọ na-amụ ga-azọ ndị mmadụ ndụ.
Ọ bụkwa otú ahụ ka ọ dị anyị. O nweela mgbe anyị tụrụ anya na ụwa ga-agwụ, ma ọ gwụghị. Ma ihe ka anyị mkpa bụ irubere Jizọs isi na ime ka a zọpụta ndị mmadụ, ọ bụghị ihe ndị mmadụ ga-ekwu. Jizọs nyere anyị iwu ka anyị ‘na-agba àmà nke ọma.’ Ọ bụ ya mere anyị ji na-agwa ndị mmadụ na ọgwụgwụ dị nso.—Ọrụ Ndịozi 10:42.
Anyị ma na ihe ka mkpa abụghị mgbe ọgwụgwụ ga-abịa. Ihe ka mkpa bụ ka obi sie anyị ike na ọgwụgwụ ga-abịa, nakwa ka anyị mee ihe gosiri na anyị ma na ọ ga-abịa. Anyị ejighị ihe e kwuru na Habakọk 2:3 egwuri egwu. Ebe ahụ kwuru, sị: “Ọ bụrụgodị na [ọgwụgwụ egbuo] oge [karịa otú i chere], na-atụ anya ya; n’ihi na ọ ga-emezurịrị. Ọ gaghị anọ ọdụ.”
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Ì Kwesịrị Ịtụ Ọgwụgwụ Ụwa Egwu?